Umbuzo: Ungayibona Kanjani Izinhlanzi Emanzini - BikeHike
Ikhaya » Okuxubile » Umbuzo: Ungayibona Kanjani Izinhlanzi Emanzini
Umbuzo: Ungayibona Kanjani Izinhlanzi Emanzini
Uzibona kanjani izinhlanzi emanzini?
Yiziphi izibuko ongabona izinhlanzi emanzini?
Wazi kanjani ukuthi uyodoba kuphi?
Imuphi ilensi yombala elungele amanzi?
Ingabe izibuko zelanga ezifakwe esibukweni zingcono ekudobeni?
Ingabe izibuko zokudoba ziyasebenza ngempela?
Ungabona kanjani ngaphansi kwamanzi ngaphandle kwezibuko?
Ingabe amalensi agqamile asiza ukubona emanzini?
Ungakwazi ukutshuza ngezibuko?
Ingabe i-garlic iheha izinhlanzi?
Ingabe amagwebu asho izinhlanzi?
Yisiphi isikhathi esingcono kakhulu sokuyodoba?
Ingabe izinhlanzi ziyalala?
Izinhlanzi zicasha kuphi olwandle?
Iyiphi inhlanzi enkulu kunazo zonke ezake zabonwa?
Iyiphi ilensi elungele ukudoba?
Ingabe amalensi angu-GRY alungele ukudoba?
Ingabe amalensi aluhlaza noma aluhlaza angcono ekudobeni?
Bheka izinhlanzi ezisebenzayo ezansi nomfula kunoma yisiphi isici sogu lolwandle, iqhubu noma enye i-protrusion ongayibona, njengochungechunge lwamadwala agxumela emanzini. Izinhlanzi zizobamba umsinga oxegayo ngemuva kwezithiyo ezifana nalezi, ukuze uqiniseke ukuthi zikhona noma ngabe uyazibona zidla noma cha.
Izingilazi ze-polarized zisiza ukunciphisa ukuxhomeka kwelanga lapho lishaya amanzi. Ngalokhu kucwebezela kuqediwe, kukwenza ukwazi ukubona emanzini. Lokhu kuyinzuzo enkulu kunoma yimuphi umdobi odoba amanzi angashoni emachibini noma othanda ukudoba emanzini agelezayo emifula nemifudlana.
Thola okungahambi kahle emaphethelweni okugxilisa izinhlanzi. Bheka isihloko sephoyinti elide elingena echibini, lapho liwela khona kungazelelwe lingene emanzini ajulile. Umkhawulo ojwayelekile wokhula uheha izinhlanzi. Izindawo lapho izingodo ziwela khona noma zakha izikhala ezincane zingabamba izinhlanzi.
Izinhlanzi zitholakala cishe yonke indawo lapho kukhona amanzi anokudla okwanele, umoya-mpilo kanye nekhava. Eduze nekhaya lakho kufanele kube nomzimba wamanzi onezinhlanzi ezihlala kuwo. Kodwa ukuze ubambe izinhlanzi, okokuqala kufanele ufunde ukuqonda lapho zicashe khona. Akuzona zonke izinhlanzi ezingahlala emanzini afanayo.
Uma uzohlala emanzini usuku lonke, ukubheja kwakho okuhle amalensi ampunga ahlukanisiwe. Lolu hlobo lwamalensi lufanelekile futhi emanzini aluhlaza okwesibhakabhaka ajulile, i-glare evimbelayo, futhi ikuvumela ukuthi ubone emanzini kangcono.
Izibuko zelanga ezifakwe esibukweni zinhle kubadobi, njengoba zisiza ekusikeni ukukhanya ngokubonisa ukukhanya kwelanga, okuphumela ekubonakaleni okungcono kanye nokuncipha kwengcindezi yamehlo.
Izibuko zelanga zokudoba ezenziwe nge-polarized zingasiza ukuvikela amehlo akho ngokuphelele. Izibuko zokudoba ezine-polarized zingavimba imisebe yelanga e-ultraviolet noma ye-UV, ukuyigcina ingalimazi amehlo akho. Imisebe ye-UV ingalimaza izingxenye eziningi zeso kuhlanganise nokulimaza i-cornea yamehlo akho. Babangela futhi ulwelwesi lwamehlo, i-photokeratitis, nokunye ukonakala kwamehlo.
Uma ugqoka izibuko noma othintana naye, ungenza incwadi yakho kadokotela ifakwe kumaski wokuntywila. Ukugqoka imaskhi yokuntywila kuyindlela ephephe kakhulu yokubona okungaphansi kwamanzi kunokuvula amehlo, futhi ilungele noma ubani ongeke akwazi ukubona kahle ngaphandle kwezibuko zakhe.
Iqiniso: Ukubenyezela kwelanga olwandle (nezinye izindawo) kugqame kakhulu! Ngaphezu kwalokho, konke ukuboniswa okuvela ezintweni ezingaphezulu kwamanzi kune-polarized kancane. Ngezibuko zelanga ezipholile ulwandle lubonakala lusobala!
I-Scuba Diving Ngezibuko (izibuko) Cha awukwazi ukwenza i-scuba diving ngezibuko. Idizayini yezibuko zamehlo isho ukuthi izingalo zezibuko eziqosha ezindlebeni zakho azivumeli isiketi sepulasitiki noma se-silicon semaski e-dive kuvaleke kahle ebusweni bakho.
Impendulo emfushane iwukuthi yebo, izinhlanzi ezifana negalikhi, kodwa kukhona okungaphezu kwalokho. Ucwaningo lubonisa ukuthi ezinye izinhlanzi zinomuzwa onamandla kakhulu wokuhogela. Kuyaziwa ukuthi ikhono lenhlanzi lokuhogela lingcono izikhathi eziyinkulungwane kunelenja. Sekungamashumi eminyaka abadobi besebenzisa ugaliki ekwenzeni ukudla kwabo ngoba inephunga elinamandla.
Izinhlanzi zidinga umoya-mpilo ukuze ziphile. Uma ithangi lakho lilayishwe amakhemikhali anobuthi, njenge-chlorine ne-ammonia, izinhlanzi zithola umoya-mpilo wazo ngokuntanta phezulu kanye nokuphephetha amagwebu. Lokhu kuwuphawu lokuthi izinhlanzi zakho zisengozini. Njengoba izinhlanzi zakho zidonsa umoya-mpilo emanzini, zikhipha isikhutha.
Izikhathi Ezinhle Zokudoba Ekuseni Ekuseni. Ngo-6:00 ekuseni kuya ku-9:00 ekuseni Kuze Kube Ntambama. 9:00 am to 1:00pm Ntambama kuya Kuhwalala. Ngo-1:00 ntambama kuya ku-5:00 ntambama
Ngenkathi izinhlanzi zingalali ngendlela efanayo nezilwane ezincelisayo zomhlaba ezilala ngayo, izinhlanzi eziningi ziyaphumula. Ucwaningo lukhombisa ukuthi izinhlanzi zinganciphisa ukusebenza kwazo kanye nokwakheka komzimba ngenkathi zihlala ziphapheme ngengozi. Ezinye izinhlanzi ziyantanta endaweni yazo, ezinye zizishanela endaweni elondekile odakeni noma emakorali, kanti ezinye zize zithole isidleke esifanelekile.
Ezindaweni ezisogwini, eduze nosebe, indawo engaphansi kolwandle embozwe kakhulu yisihlabathi kodwa ingase ibe nezingxenye zamatshe avele obala. Izinhlanzi zihlala kukho konke ekujuleni emanzini asogwini, kodwa eziningi zihlala eduze naphansi. Eziningi zidla eduze kwesembozo, njengedwala noma izixhobo zamakhorali, lapho zingaqamekela khona inyamazane.
Yayiyini Inhlanzi Enkulu Kunazo Zonke Ezake Zabanjwa? Ngokwamarekhodi e-IGFA, inhlanzi enkulu kunazo zonke eyake yabanjwa kwakuyishaka omkhulu omhlophe owawunesisindo esingamakhilogremu angama-2,664 (1,208.389 kg) angakholeki. Ukuqhamuka ogwini lwaseCeduna, e-Australia, ngo-1959, kwathatha u-Alfred Dean othukuthele nje imizuzu engama-50 ukunqoba impi yokulwa nalo shaka oyitoni elilodwa.
Njengoba sishilo ngenhla, amalensi e-copper (nsundu noma anhlaka) alungele ukudoba. Kukhona enye into okufanele icatshangelwe, futhi: izimo zokukhanya ezikuzungezile. Kungakhathaliseki ukuthi uyadoba ukubona noma cha, uma kuguqubele, kuguqubele noma "izimo zokukhanya okuphansi," lapho-ke uzojabula kakhulu ukugqoka amalensi ethusi.
Amalensi ampunga angcono kakhulu ekudobeni ogwini lapho ilanga lishisa futhi lishubile ngoba anikeza ukuvikeleka okukhulu. Uma uqonde ekuvuleni amanzi futhi udinga ukubeka phambili ukuvinjwa kokukhanya ngaphezu kokuthuthukisa umbala, okumpunga ilensi engcono kakhulu yokudoba.
Ngasolwandle, isibuko esiluhlaza siyindlela yokuhamba. Ngamanzi ahlanzekile nasogwini, isibuko esiluhlaza kanye nethusi yizinketho ezinhle. Ngokukhanya okuphansi ekuntweleni kokusa noma ukuhwalala, isibuko sesiliva sokuphuma kwelanga sifanelekile. Amalensi ampunga ayisinqumo esingcono kakhulu semisebenzi yansuku zonke.
Umbuzo: Ingabe Inhlanzi Ingawagqoka Amalensi Okuxhumana
Umbuzo: Kungani I-Iss Isebenzisa Amalensi Eso Lezinhlanzi
Umbuzo: Iyini Izinhlanzi Zamanzi Abandayo
Yini Amanzi Esikhashana Ezinhlanzi Ze-Betta
Yini Amanzi Eyenza I-Betta Fish Idinga
Iziphi Izinhlanzi Eziphuma Emanzini
Yiziphi Izinhlanzi Ezinhle Zamanzi Ezibandayo
Umbuzo: Idlani Izinhlanzi Emanzini
Umbuzo: Zidlani Izinhlanzi Zamanzi Olwandle
Liyini Izinga lokushisa I-Betta Fish Water
Impendulo Esheshayo: Ingabe I-Angel Fish Amanzi Amasha Noma Izinhlanzi Zamanzi Anosawoti
Impendulo Esheshayo: Ingabe Izinja Zingasebenzisa Amalensi Ayimpumputhe Anemibala
Ingabe Amalensi Okuguqula Angasetshenziswa Ukudoba
Post Previous: Umbuzo: Kufanele Afudumele Kangakanani Amanzi Ezinhlanzi Ze-Betta
Post Next: Impendulo Esheshayo: Ingabe Amanzi Acwebile Alungile Ngenhlanzi Ye-Betta
Ingabe I-Flounder Izinhlanzi Zamanzi Abandayo
Ingabe Amanzi Acwebile Alungele Izinhlanzi
Impendulo Esheshayo: Ingabe Amanzi Acwebile Alungile Ngenhlanzi Ye-Betta
Umbuzo: Kudingeka Afudumale Kangakanani Amanzi E-Betta Fish
Umbuzo: Ungawafudumeza Kanjani Amanzi Ethangini Lezinhlanzi
Umbuzo: Uyincibilikisa Kanjani Izinhlanzi Eziqandisiwe Emanzini
Impendulo Esheshayo: Ungakumisa Kanjani Ukuhwamuka Kwamanzi Ethangini Lezinhlanzi
Impendulo Esheshayo: Ungayikhipha Kanjani I-Chloramine Emanzini Ngenhlanzi
Impendulo Esheshayo: Ungayifaka Kanjani I-oksijeni Emanzini Ngenhlanzi Ngaphandle Kwepompo